ह्वाट्सएपबाट एक दिनमा कति मेसेन्ज जान्छन् ? | News Polar
ह्वाट्सएपबाट एक दिनमा कति मेसेन्ज जान्छन् ?
एजेन्सी कार्तिक १७, २०७७, सोमबार
फेसबुकले संचालन गरिरहेको मेसेजिङ प्लेटफर्म ह्वाट्सएपबाट एक दिनमा कति मेसेज आदान प्रदान होलान् ? नेपालमा त्यति प्रयोग नगरिने तर विश्वभर अत्यधिक लोकप्रिय ह्वाट्सएपबाट दैनिक १००० करोड अर्थात् १००,०००,०००,००० मेसेज प्रवाह हुन्छ भन्दा पत्याउन कठिन हुन्छ । फेसबुक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी मार्क जुकरबर्गले पहिलो त्रैमासिक विवरण सार्वजनिक गर्दै यसका बारेमा जानकारी दिएका हुन् ।
ह्वाट्सएपले यो शिखर चुमेको पहिलो पटक भने होइन । सन् २०१९ को डिसेम्बर ३१ का दिन पनि यही अवस्था थियो । त्यसपछि ह्वाट्सएपले एकपछि अर्को रकेर्ड बनाउँदै गएको छ । जुकरबर्गको भनाईमा ह्वाट्सएप र फेसबुक फेमिलीका बाँकी एप्सको दैनिक प्रयोग २५० करोड करोडभन्दा बढी मानिसले गरिरहेका छन् ।
स्टाटिस्टिटाका अनुसार अक्टोबर महिनासम्ममा ह्वाट्सएपका २०० करोडभन्दा बढी सक्रिय प्रयोगकर्ता छन् । फेसबुकको मेसेन्जरका भने १३० करोड सक्रिय प्रयोगकर्ता थिए । जनवरी महिनामा एन्ड्रोइड डिभाइसमा ह्वाट्सएप ५०० करोड भन्दा बढी पटक डाउनलोड भएको थियो । डाउनलोडका आधारमा गूगल पछि ह्वाट्सएपले रेकर्ड कायम गरेको हो ।
जुकरबर्गले इन्स्टाग्राममा पनि फेरबदल गरिएको बताएका छन् । कम्पनीले नयाँ अपडेट दिँदै मेसेन्जर र इन्स्टाग्राम मेसेजिङ दुबैलाई एकीकृत गरिएको जनाएको छ ।
फेसबुकले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर र ह्वाट्सएपमा सामयिक सुधार र नयाँनयाँ फिचर थप्दै गएको जुकरबर्गले बताएका छन् । यी परिवर्तनबाट उपभोक्ता, ग्राहकले एप्स संचालनका क्रममा राम्रोसँग आफ्ना धारणा अभिव्यक्त गर्न पाउने कम्पनीले बताएको छ ।
तुलनात्मक रूपमा ठूला साइजका तस्वीर, अन्य सामग्री र मेसेज ह्वाट्सएपबाट सहज रूपमा प्रवाहित हुने गर्दछ । व्यक्तिदेखि सबैजसाे कम्पनीहरूले ग्रुप बनाएर सन्देश प्रवाह गर्न यस मेसेजिङ एप्सकाे बढी प्रयाेग हुने गरेकाे छ । भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, युराेप सबैतिर ह्वाट्सएप निकै लाेकप्रिय छ ।
प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७७, १५:०१:२५